Tag: yakabhadharwa kutsvaga | Martech Zone
Tag: yakabhadharwa kutsvaga
Mwedzi mishoma yapfuura ndanga ndichishanda pane zvehurongwa hwekushambadzira zvemadhijitari uye zvitupa zvekambani yepasi rese uye yunivhesiti, zvichiteerana. Rwave rwuri rwendo runoshamisa - kuongorora zvakadzama kuti vashambadzi vedu vari kugadzirirwa sei muzvirongwa zvavo zvedhigirii, uye vachiona mipata ichaita kuti hunyanzvi hwavo hutengeswe munzvimbo yebasa. Chinokosha kune echinyakare degree zvirongwa ndechekuti ma curriculae anowanzo kutora makore akati wandei kuti abvumidzwe. Nehurombo, izvo zvinoisa vanopedza kudzidza
Iwe unoziva mutsauko uripakati peSEO (Tsvaga Injini Kugonesa) uye SEM (Yekutsvaga Injini Kushambadzira)? Iwo ndiwo mativi maviri emari imwechete. Maitiro ese ari maviri anoshandiswa kutora traffic kune webhusaiti. Asi imwe yacho iri padhuze, kwenguva pfupi. Uye imwe yacho inowedzera mari kwenguva refu. Wakatofungidzira here kuti ndechipi chiri chakanakira iwe? Zvakanaka, kana iwe uchiri kusaziva, pano